Buddhism » Emotion Management (၁) – ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း – Negative Emotion and Regrets	22
weiwei says: မရောက်တာကြာလို့ လာလည်တာပါ ..
ခင်ဇော် says: အမှန်က အနောက်တိုင်း က စိတ်ကို ချဉ်းကပ်တဲ့ သီဝရီ တွေ
weiwei says: တရားခံကတော့ အ၀ိဇ္ဖာ … အမှန်ကို မမြင်နိုင်ဘူး …
weiwei says: ကွန်မန့်လေးတစ်ခု ပေးလိုက်တာ ကြယ် ၃ ခု ဖြစ်သွားတယ်တော့ …. Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: Best Comment အစိမ်း ကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ ဟိ။
kai says: မြန်မာတွေက..အတိတ်ကိုဆွဲဆန့်လိုက်တာများ… ဟိုဘ၀ကမကောင်းခဲ့လို့.. ဒီဘ၀အခုလိုဖြစ်နေတာအထိ…။
ခင်ဇော် says: ဂစ်ဂစ်။
ဆရာတော်ပြောတာကိုလည်း.. ထောက်ခံပြောပေးရသေး.။ နဂေ့တစ်တဲ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဂျစ်စူ says: တင်ပါ့ဖလာ့
Ma Ma says: ခုရက်ထဲမှာ မဟာဗောဓိက လွှင့်နေတဲ့ စိတ်ဖြင့် ရောဂါကုသမှုဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ခြင်း (အတိအကျမဟုတ်) ဆိုတဲ့ တရားလည်းကောင်းတယ်။
သဂျီးကိုလည်း အဲဒီဆရာတော်နဲ့ တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးစေချင်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အဲဒီတရားက မလတ်ပြောပြလို့ ၂ရက်စလုံး သွားနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရားပေ့ါ။
Thint Aye Yeik says: (အဲ့လို သဘောတရားမျိုးကို… ဆရာတော် ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)လည်း ပြောလေ့ရှိတယ်။ )
အခုလို… ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင်… ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဟောတဲ့တရားကို ပိုသဘောကျ…. ———————
အခုနောက်ပိုင်းတော့.. အပြစ်ထိုင်တင်နေလို့လည်း ဘာမှ မထူးဘူး..ဆိုပြီး… နောင်တတွေနဲ့ ပူလောင်နေမယ့်အစား..နောက်တစ်ခါ ဒါမျိုးနောင်တ မရအောင်နေမယ်လို့ပဲ တွေးတော့တယ်။ .နောက်ပြီး ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရဲ့ တရားထဲက…သဘောအကျဆုံး…တစ်ခုဖြစ်တဲ့…
အဲလိုလေး မကြာခဏ တွေးပြီး လုပ်ဖြစ်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: စိတ်ဆိုတာမျိုးကလည်း လွှတ်ပေးလို့ကတော့ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်း မသိနိုင်မျိုးကိုးးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမလေး. . အဲဒီ negative emotion တွေပေါ့ . . . အတိတ်ကို ပြန်တွေးပြီး တနုံ့နုံ့ဖြစ် . . . အနာဂတ်ကိုတွေးပြီး အလိုအကျတာတွေ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တာတွေဖြစ် . . .ပစ္စုပ္ပန်ထဲ ပြန်ရောက်လာရင် စိတ်ဓာတ်တွေကျ . . . တရားလေးဘာလေး ထိုင်ဦးမှပါ . .
မြစပဲရိုး says: လောင်းကစား Post ကို ဝင်တင်ကာ မှ ကျုပ် ချစ်တူမ ရဲ့ တရားစကား Post နဲ့ တိုးတော့ တာဘဲ။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .တိုတိုနဲ့လိုရင်းပဲမန့်မယ်………….
..ကြိုက်တယ်…ကြိုးစားကာနေပါအုံးမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အပေါ်ကမန့်က…
.နောက်တစ်နှစ်စာခန့်ပါအုံးမလား….ငိငိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: စိတ်ပူတဲ့ ဒဏ်ဟာ
မြစပဲရိုး says: ဆရာတော် တရား တွေထဲ ငရဲနဲ့ ခြောက် ဘုံ နဲ့ မြှောက်တဲ့ လက်တွေ့မပါတာ တွေ ကင်းပြီး မျက်မြင် ကြုံရတဲ့ စိတ်ပြသနာ တွေ ကို ထိန်းချုပ်နည်း တွေ ပါတာမို့ သဘောကျတာပါ။
အတု ကို ကန်တော့ လို့ နတ်ပြည်ရောက် တာထက် ပိုပြီး ဂုဏ်ရှိပါရဲ့။ :D Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ကျနော် လည်းး သေချာ ဖတ်ပြီးးမှ